“Shawaa Kibba Lixaa, Diilallatti daandii cuftan jedhanii qeerroo irratti dhukaasanii akkasitti madeessan. – Kichuu
HomeAfaan OromooTV“Shawaa Kibba Lixaa, Diilallatti daandii cuftan jedhanii qeerroo irratti dhukaasanii akkasitti madeessan.
“Shawaa Kibba Lixaa, Diilallatti daandii cuftan jedhanii qeerroo irratti dhukaasanii akkasitti madeessan. Nama afurtu dhahame. Garuu du’aa dhiigaa obbolaa keenya wajjin falmanna malee sodaa lubbuuf callifnee hin teenyu”
Roorroo waraanni Abiy dubartoota Oromoo irratti raaw’atu laalaa.
“Haadhooli fi duubartoota magaala awwadaay irra
Taate guuyya arran tana magaala Awwadaay ganda liimay (boonddee) jedhamu keessati yaali guudeedda poolisiin humna addaa akka waan qeerroo konkoolatoota uugguura caabsan irrati taarkaanfi fudhaacha jirtuu dhoorkuf deemu of faakkesani hushura keessa taa,udhan duubarti maaqan ishi #Boontu_Kadir jedhamtu tan qe’ee ishi keessa ta’a jirtun deem jimaa keessa seeni jedhanin diddee duraa fiigde. Itti aansani yeroo lammaffaadhaf dubaarti maaqan ishe #Riyaana jedhamtus isi ooyru keessa jimaa kutata jirtu qabani na gad dhiisa an haadha ilmaaniiti yeroo isin jettu me harma kee nuutti agarsiisi jedhanini yeroo isheen harma ishe elmitee agarsiiftu morma ishi gad qabani hidhan sana booda yeroo isin rifaatun gaggabdu ooyru keessati darbani ishe lafatti kuuftu jirtu hawaasni ganda argudhan fudhani manati gaalchan.
Akkasuma humni adda poolisi oromiya kun ganduma kanatti torbe dabres haadha ilmoo halkan mana baasani itti taphatani oldeebisan ergasi haati ilmaani sun awwadaay keessa hin taa.u jechudhan magaala baabileti meesha isi hunda saassabatte maati ishe biraatti gaalte jechudhan dubaartooni fi haadholin ganda sana keessa jiraatan sooda jirachudhaf isaaniti dhagahama jirtu qeerroo awwadaayitti ibsaatan.”
Gareen #Jimaa-team jettanii of moggaaftanii mootummaa nama nyaataa kanaan ijaaramtanii, magaalaa jimmaan keessatti ijoollee sabboontota adamsaa jirtanu, of qusadhaa.
Yaaliin isin Qeerroo mirgaaf falmaturratti godhaa jirtanu hundasaa argaarra dhagahaarra. Waan baayyee qaanessaadha. Yaadaan wal mormanii wal amnsiisuun utuu jiruu, kootu caalaa, humnaan isan an deeggaru deeggari jechuun kun moo’amuudhamalee, ijoollee sabboontota humnaan doorsisuuf yaaluun qaaniidha. Keessattuu gocha kana keessatti adda durummaan warri hirmaataa jiranu namoota Maqaan jaraa gurguddaa fi xixinnaa hunda jaraa nibeekna. Gocha kanarras of hin qusattan taanaan, iccitiin keessan hundisaa nu harka jira. Ummataaf ni dhiyeessina. Isin Qeerroo bakka hin buutan. Qeerroon yeroo ammaa mirga isaaniif falmataa turan mana dhiiraa jiru.
Ammas daballee isinitti himna, gocha godhaa jirtan kanarraa of qusadhaa!
Isaaq Zeenuu Abbaa Garoo
Gurmuu Eegdota Warraaqsa Oromiyaa jedhamu keessaa namni tokko QBO’n to’atamuu – https://t.co/wSFHMK1NsO pic.twitter.com/40r1MOpLow
— Kichuu (@kichuu24) September 8, 2020
“Mootummaan kuni kakufaatiin isaa dhiyaatee Jira. Hojjattoota Waajjira Gumurukaa (customs commission) dirqisiisuudhaan mindaa Ji’a tokkoo mallatteesise jira. Anis hojjataa waajjira kanaatt. Maaliif kanfalla? mootummaan projektii ofiif qopheesse akkamiin Baasii mataa isaatiin hin hojjatu jennee gaafannus deebiin nuuf kenname, ajajni head office irraa nutti kennamee jedhan. Kunoo akkasiin nu dirqisiisanii mootummaa afaan qawweetiin obbolaa keenya fixuuf qarshii nu kennisiisan.”
የትግራይ ክልል ምርጫ
Biyya beekaaf kabajaa hin qabne!